Ama-Olimpiki asebusika azoba nama-drones akwazi ukuzingela amanye ama-drones | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Ama-Olimpiki asebusika azoba nama-drones akwazi ukuzingela amanye ama-drones
Ngeshwa nangenxa yokusetshenziswa kabi okwenziwa abanye abalawuli, ngokungazi noma ngokungazi, ngama-drones abo, noma ngabe ikuphi ubukhulu futhi lapho bebhekene nengozi, namuhla kubukeka kubalulekile ukufaka uhlobo oluthile lohlelo olukwazi ukunciphisa amandla ukutholakala kwe-drone ethile ezindaweni ezithile ezivikelwe. Njengoba ucabanga ngokuqinisekile, umgubho we Imidlalo Yama-Olympic Yasebusika Abekho ngaphandle futhi neziphathimandla eziphethe inhlangano yazo sezivele zenze umqondo wazo ngalokhu.
Umbono olula kakhulu, sicabanga ukuthi ngokwezindleko zokuqaliswa kwawo nezinga lokuphumelela, abahleli ababenalo ukusebenzisa amadroni akwazi ukubamba amanye ama-drones, okungukuthi, lowo mqondo wokuthi kwesinye isikhathi sesivele sikuvezile ezosebenzisa imodeli ethile yedrone enesistimu ethile engakwazi ngayo qala inethiwekhi lapho noma yiluphi uhlobo lwe-drone olungandiza endaweni yethonya lenethiwekhi lubhajwe.
Abahleli bama-Olimpiki asebusika bazosebenzisa ama-drones afakwe amanetha ukuthatha izinto ezingaziwa
Ukungena emininingwaneni ethe xaxa, njengoba sekuveziwe, ngokusobala la ma-drones azondiza ngaso sonke isikhathi ku-a ukuphakama phakathi kwamamitha ayi-150 kuya kwangu-200 ukuphakama. Kungenzeka kanjani ukuthi kube ngenye indlela futhi kucace kakhudlwana ngokwenzeka eduze kwabo, bona, ngaphezu kwale nethiwekhi eshiwo ngenhla, bazohlonyiswa ngekhamera yokubheka ekwazi ukubamba konke okwenzekayo eduze kwabo, ngale ndlela Lapho isilawuli sithola uhlobo lwento engaziwa endiza eduze kwe-drone, i-drone ingayibamba.
Imvamisa futhi ngaphandle kokuthi kunezinkampani ezingemuva kwalolu hlobo lwentuthuko, iqiniso ukuthi lolu hlobo lwama-drones azilutho ngaphandle kokulungiswa kobuchwepheshe be-drone, ngokushesha futhi ngobubanzi obukhulu kunama-drones ajwayelekile avela kumikhiqizo eyaziwayo efana ne-DJI. Ziqukethe i-capsule edubula inetha ebambeka phakathi kwezinjini ze-drone ezobanjwa, ngaleyo ndlela ibangele ukuthi iyeke ukusebenza futhi ingatholwa ngabezokuphepha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » drones » Ama-Olimpiki asebusika azoba nama-drones akwazi ukuzingela amanye ama-drones
IMozilla iyaqhubeka nohlelo lwayo lokusebenza, kepha manje nge-Things Gateway